Embroidery Kit, Embroidery Thread, Wood Yakarukwa Wreath - Koshesa
Nekutarisa Mhando yepamusoro, kuendesa nekukurumidza, iwe unofanirwa nezvakanakisa.
Muromo bhegi regoridhe
Tumira wega, tumira shamwari, rega vanhu vazhinji pamwe chete vakanaka
Yakagadzirwa nemaoko, kuratidzwa kwemoyo, kutsigirwa kwezvakanaka.
Iwo maratidziro akashongedzwa nemaoko ndeemukati uye convex, yakajeka ruvara, isina kusimba uye inoyevedza, inofamba imba yekugadzira, chengetedza zvakapfava chero nguva uye chero nguva, chero chiitiko chine mwenje wayo.
Sarudzo dzako dzese dzakavharwa pano. Tine machira-mativi-matatu, piro makesi, magirazi, wallets, zvishongedzo zvevhudzi, mitsipa, zvindori, mhete, matumwa, masiki, hengechefu, shinda yekushongedza uye kuisa maturusi. Mhando yepamusoro, kuendesa nekukurumidza, iwe unofanirwa nezvakanakisa.
Customized nezvakarukwa Set DIY Handmade Sewing C ...
CHERISH, yakavambwa muna 1995, iri muYiwu, China, guta guru rezvinhu zvidiki pasi rose. CHERISH inyanzvi inogadzira inogadzira, kugadzira uye kushambadzira zvigadzirwa zvakagadzirwa nemaoko zve DIY. Kwemakore makumi maviri apfuura, nekambani yakasimba dhizaini, kusimudzira, hunyanzvi kugona, kugadzirwa kwemuchinjiko-kusona DIY indasitiri kupa dzinoverengeka zvakanakira. Makambani aripo ekambani: Ailuo, Aiyouwei, CHERISH, Muchinjikwa-dhizaini, kupenda kweDiamond, Patchwork, Embroidery akati wandei makuru ezvigadzirwa anotora chinzvimbo chakakwirira mumusika. Vanopfuura zviuru zviviri zvezvitoro zvakatengwa pamusika munyika yose, indasitiri yakazivisa hutungamiriri. Welcome to CHERISH.
Cherish, yakavambwa muna 1995, iri muYiwu, China, guta guru rezvinhu zvidiki pasi. Icho chinotarisa pane DIY ruoko-rwakagadzirwa chigadzirwa dhizaini, kugadzirwa uye kushambadzira kwehunyanzvi hwekugadzira mabhizinesi. Basa redu ndere kutyaira vatengi kutengesa kuburikidza nehunyanzvi dhizaini, yepamusoro hunhu ...
Koshesa machira ekushongedza anozvigadzira uye otengesa, chairo sosi inogadzira, yakawanda uye yakaderera mutengo uye mutengo wakaderera, mhedziso yekutanga ruoko ruoko, hukuru hwakawanda hwekusarudzika, Chigadzirwa maficha sarudza mhando yepamusoro mbishi, izvo zvisiri nyore pilling, hazvisi nyore ku ...
Embroidery ndiro izwi rakajairika remhando ipi neipi yekushongedza yakashongedzwa pamucheka une tsono neshinda.
Embroidery ndiro izwi rakajairika remhando ipi neipi yekushongedza yakashongedzwa pamucheka une tsono neshinda. Kune maviri marudzi ekushongedzwa: sirika yakashongedzwa uye minhenga micheka. Mune iyo silika kana imwe tambo kana shinda dzakabayiwa netsono ine imwe dhizaini uye ruvara pane wekushongedza mukadzi ...
BATA NEVAMWE VANODA MATCHA